प्रयोगकर्ता समीक्षा को XMailer, XServers, XDomains, XHeater, Allion.
के हाम्रो प्रयोगकर्ता बारेमा भनिरहेका छन् XMailer, XServers, XDomains, XHeater, Allion
[email protected] 23.06.2020 मा 22:50
[email protected] 13.02.2020 मा 22:11
[email protected] 01.02.2020 at 7:39
googles 27.03.2019 मा 16:45
googles 26.03.2019 मा 20:37
डेनिस 20.11.2018 मा 13:53
अलमल्ल खोजी को कार्यक्रम गर्न न्यानो-अप सर्भर, म सबै कुरा पाउन या त थिएन फिट मा मानकहरु र कार्यक्षमता वा मूल्य । एकदम संयोगले केही भिडियो म सुने कि त्यहाँ छ यस्तो कार्यक्रम Xheater किनेको उनको, तर यो बाहिर लागे भनेर सर्भर सेट जो म, केही कारण लागि जोडिएको छैन कार्यक्रम, छैन पनि दुखी I bought u guys अविस्कार, इमानदार हुन, लिएर केही समय अघि धेरै क्षण थियो अनुमान गर्न (उदाहरणका लागि स्थापना पछि को सर्भर मा जो postmaster, यो outputted एउटा त्रुटि dkim र dmark र मानिन्छ साँचो छैन spelled out, समस्या हल थियो बस पुन: स्थापना को धुरा र पुन: स्थापित pmta, postmaster डोमेन थियो हटाइयो छैन, र पछि पुन: स्थापना pmta डोमेन सफ्टवेयर छैन पुष्टि). त्यसैले मूलतः नरम म धेरै खुसी छु, म इच्छा, यो मान्छे छैन को विकास रोक्न मदत. ती.समर्थन छ, छिटो प्रतीक्षा समय काम घन्टा को समयमा गर्न सकिन्छ भन्दा कम एक मिनेट ।
निकोलस 03.11.2018 मा 11:34
समीक्षा म केही देख्न सकारात्मक छ । नकारात्मक भन्ने फैलिएको छैन? जब तपाईं प्रतिक्रिया कठोर ग्राहक, जो सोध्छन् भन्दा बढी2प्रश्नहरू? जब ग्राहक बोल्न गर्दैन कुनै पनि अपमानजनक शब्दहरू, र प्रबन्धक समर्थन खुल्लमखुल्ला भन्ने संकेत गर्छ ग्राहक कुनै? मानिन्छ ग्राहक कुरा छ भने उहाँले एक सज्जन? यी शब्दहरू आफ्नो प्रबन्धक । जब तपाईं लक किनेको कार्यक्रम र नजिक पहुँच गर्न तिनीहरूलाई? कार्यक्रम तपाईं किन्न, तर यो काम गर्दैन, किनभने नयाँ संस्करण जारी र तिर्न आवश्यक, फेरि यो संग 50% छुट, अन्त मा भङ्ग छन् र तपाईं नजिक हालको साइट पहुँच र च्याट गर्न, आदि? हो, तपाईं घोषणा ड्यास मा RPN र सबै.
जुराusa. kgm 18.10.2018 at 10:04
चयन गर्दा, कार्यक्रम लागि पत्राचार गरेको थियो एक विकल्प को धेरै विकल्प को साइटहरु. विशुद्ध मौका द्वारा म देखे एक कार्यक्रम देखि XSPAMER. रोकियो आफ्नो विकल्प मा तिनीहरूलाई छ । कहिल्यै पछुतो मेरो विकल्प छ । म किनेको एक सेट हुन्छन् जो चार कार्यक्रम छ । कार्यक्रम अन्तरक्रिया र प्रत्येक अन्य पूरक, सबै पूरा यसो मापदण्ड छ । निरन्तर अपडेट. क्षण मा म तिनीहरूलाई विचार मा सबै भन्दा राम्रो बजार छ । ती.समर्थन उच्चतम स्तर मा, तुरुन्तै प्रतिक्रिया को उपचार गर्न ग्राहकहरु प्रदान र अत्यधिक योग्य सहयोग । नकारात्मक समीक्षा यी कार्यक्रम बारे, म सोच्न, देखा देखि ती मानिसहरूलाई बुझेका छैनन् वा छैन बुझ्न चाहन्थे. सफ्टवेयर डेवलपर्स र प्राविधिक सहयोग. म तपाईं सफलता इच्छा को विकास मा आफ्नो गतिविधिहरु. बजार मा उत्तरदायी र इमानदार पेशेवर छ. धेरै सानो छ ।
Ivan 24.06.2018 मा 17:07
कार्यक्रम XHeater काम ठीक, मेरो समारोह प्रदर्शन । लागि देख एक जोडी संग छिमेकीलाई कार्यक्रम को न्यानो-अप, म फेला यो पहिलो कार्यक्रम XHeater फाले र उसलाई Ref. लिंक को लागि यो, उहाँले हस्ताक्षर माथि र कार्यक्रम किनेको छ ।
Vyacheslav 30.05.2018 मा 2:10
सफ्टवेयर धेरै सुन्दर छ, सेट अप सर्भर मा उच्चतम स्तर सेट अप गर्न एक सर्भर स्थापना गरेर बस PMTA थियो एक DNS रेकर्ड स्वयं, एक सर्भर स्थापना गरे बारे 20-30 मिनेट, सबै डाटा मा Xservers खेद्नुभयो र सबै गए स्वतः स्थापित, र सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, पछि यी सेटिङ कुनै पत्र बिना मा समस्या inboks जाने, गति मात्रा ठीक छ pulls सर्भर बाँच्न एक लामो समय को लागि, यदि सही पत्राचार सूची गर्न के, म धेरै सन्तुष्ट छु, धन्यवाद विकासकर्ताहरूको लागि यस्तो सुन्दर कार्यक्रम, र धेरै उचित मूल्य, म हुनेछ पनि भन्न यो धेरै सस्ता लागि यस्तो कार्यक्रम रूपमा, म किनेको प्रशिक्षण संग स्क्रिप्ट 10 गुना बढी महंगा, र यी परिणाम थिएनन्, सामान्य मा, म सिफारिस, म बिल्कुल यो प्रेम!
Mohamed Ruziev 15.05.2018 मा 17:23
तिमीहरूलाई भन्नेछु कार्यक्रम बारे बस मलाई प्रहार. मैले देखेको छैन कार्यक्रम छैन भन्ने लालच संग यसको केही साना राम्रो गुण र त्यसपछि wouldn ' t कटौती पैसा को लागि समर्थन सेवाहरू । अन्त मा, सबै गए सामान्य रूपमा. त्यहाँ कुनै "संभोग" खरीद देखि, त्यहाँ छ । तर त्यसपछि म भर आए एक कार्यक्रम Xmailer देखि मान्छे Elinesoft. ठाउँ छ!!! त्यसैले के, को प्रयोग यो कार्यक्रम? र जसरी पनि के त्यो गरिरहेको छ? व्याख्या । तपाईं आफ्नो उत्पादनहरु, गरेका छन् आफ्नो ग्राहक आधार र चाहनुहुन्छ संग कुराकानी गर्न तिनीहरूलाई प्राण, आत्मा, यस कार्यक्रम तपाईं को लागि छ. कुराकानी गर्न र हृदय हृदय, कुनै राम्रो तरिका छ भन्दा व्यक्तिगत पत्र छ । अब परेवा लगभग उड, र यो पोस्ट को रूस कुनै कुरा कति खोजे आफ्नो whim सन्तुष्ट छैन । र सबै पत्र लेख्न समय र प्रयास पर्याप्त छैन । त्यसपछि तपाईं पक्कै पनि छ कि भन्न सजिलो इमेल, केही सरल छ । यहाँ तपाईं यसलाई अंदाजा, तर नभएसम्म तपाईं ग्राहकहरु संग आफ्नो औंला गर्न गणना । लेखे, पठाए - लागि प्रतीक्षा ईमोटिकनहरू...) र छ भने तपाईं ग्राहकहरु भन्दा 1000 !? त्यसपछि के गर्ने? र खैर, तपाईंलाई थाहा छ कि बक्से को आफ्नो ग्राहकहरु, तर आफ्नो ग्राहक को धेरै अझै पनि छ मालिक र supervisors गर्ने निर्णय गर्न आफ्नो प्रेम कुराकानी । यो एक फरक स्पाम फिल्टर छ, यो सीमा हुलाक सेवा द्वारा नम्बर को शिपमेन्टहरू । त्यसपछि तिनीहरूले दाबी लागि आफ्नो संलग्न फाइलहरू र link in the email didn ' t like your headings भनेर वर्णन को सार पत्र समावेश "स्टप शब्दहरू". र यस्तो अवसरहरू छन्, हरेक दिन थप र अधिक. निस्सन्देह, यो अर्को समाचार वरिपरि आफ्नो उत्पादनहरु, तपाईं बस शेयर मा आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट गरौं र आफ्नो ग्राहकहरु मा आउन र वरिपरि हेर्न. र तपाईं गर्नुपर्छ भने यो हेर्न अहिले वा पछि यो दिन । You can ' t get them to look at Your website. व्यक्तिगत मेल र आफ्नो ग्राहक एक पटक एक दिन जाँच । Xmailer आफ्नो समाचार सीधा राख्दछ अन्तर्गत नाक तपाईंको ग्राहक को, जुनसुकै को कति तपाईं मा छ के हुलाक सेवा तिनीहरूले बक्से. सहित सबै विकल्प को यस कार्यक्रम मा, तपाईं आफ्नो इनबक्स मा. कार्यक्रम तपाईं मदत गर्नेछ पत्र लेख्न, तिनीहरुलाई खूबसूरती मदत संग धेरै templates. तपाईं पनि देख्न सक्छौं कि मिल्यो, आफ्नो पत्र प्रापक खुलेको छ आफ्नो सन्देश. सबै, 20 भन्दा बढी सुन्दर उपकरण समावेश गर्न यो कार्यक्रम एक छुट्टै कार्यक्रम छ । भने जम्मा गर्न यी कार्यक्रम र कन्फिगर गर्न पत्राचार सूची मा आफ्नै, महिना र समय को खोज छ, पर्याप्त छैन । र प्रत्येक चरण आवश्यकता उपयुक्त योग्यता र अनुभव छ । यो कार्यक्रम साँच्चै एक व्यापार उपकरण छ । पनि भने, तपाईं ग्राहकहरु संग सबै समस्या, त्यो तपाईं प्रदान तयार आधार 2-जीआईएस मा निर्माण यो । तपाईं चयन गर्न आवश्यक उद्योग र पठाउन आफ्नो सुझाव । सफ्टवेयर तपाईं गर्न अनुमति दिन्छ भेला संभावित ग्राहकहरु देखि विभिन्न साइटहरु मा दुई क्लिक, माथि गर्न सामाजिक सञ्जाल । सबै भनेर म छु, यस्तो लेखे तपाईं यस बारे कार्यक्रम, बस को हिमशैल को टिप । एक लाइसेन्स खरीद लागि 2900 rubles(यो भन्दा बढी महंगा 5000 rubles ), तपाईं प्राप्त हुनेछ एक अविश्वसनीय अन्तरिक्ष लागि ई-मेल मार्केटिङ. जवाफ!)
Constantine 14.05.2018 मा 20:28
प्रयोग xdomains र आफ्नो पैसा लायक भन्दा बढी छ । सेटिङ सरल छन्,कुनै डोमेन पद वर्णन छ । प्रविधी समर्थन छ, बिजुली छिटो सबै प्रश्नहरूको जवाफ. सबै धेरै छ । धन्यवाद लागि यस्तो चमत्कार सफ्टवेयर.
प्रशासन 26.03.2018 मा 22:47
यहाँ एउटा लेख मा हाम्रो मदत पोर्टल मा पुनर्स्थापना को लाइसेन्स को लागि हाम्रो सफ्टवेयर, यदि तपाईं परिवर्तन गर्न प्रणाली र हराएको लाइसेन्स: https://blog.xspamer.ru/2018/03/24/перенос-и-восстановление-лицензий/ हामी मात्र गर्न सक्छन् स्थानान्तरण अवस्थित लाइसेन्स । ती जो थिए, सक्रिय आधारमा यो भुक्तान पुष्टि र ग्राहक आईडी प्रयोग गरिएको थियो भन्ने सक्रिय गर्न लाइसेन्स. आफ्नो समझ लागि धन्यवाद!
Samvel 26.03.2018 मा 0:33
कार्यक्रम किनेको xdomains लागि, मेरो काम यो प्रतिस्थापन छ । पछि पुनर्स्थापित ओएस लाइसेन्स उड्यो बन्द ठीक गर्न, तपाईं आवश्यक प्रमाण प्रदान गर्न भुक्तानी, म बुझ्न सक्दैन कसरी, यो के गर्न, तर त्यसपछि बुझे कि जाँच आइपुग्छ मा Yandex, मेल, तर म साफ र थियो, लामो र कठिन काम सङ्कलन गर्न बैंक बयान, जाँच कार्ड, आदि. पुष्टि गर्न, अझै पनि सक्रिय छ, तर त्यसपछि फेरि स्पष्ट ओएस पुन: स्थापना, र अब फेरि पुष्टि भुक्तान र तिर्न 500r. प्रत्येक protected from धोखाधडी, तपाईंलाई थाहा छ, तर यो राम्रो छ पठाउन । कुञ्जी प्रयोग सक्रिय गर्न कार्यक्रम अलग रूपमा, गरेको छ एक मा मेरो कार्यक्रम छ । अब कुल कार्यक्रम को लागि भुक्तानी र प्रयोग गर्न सक्दैन. किन्न हुनेछ नयाँ छ ।
Stanislav 07.02.2018 मा 18:28
किनेको Xdomains , सबै जस्तै, समय धेरै बचत र नसाहरू मा पदवर्णन डोमेन लागि, खरीद म सिफारिस!
प्रशासन 26.01.2018 मा 1:45
प्रतिक्रिया पछिल्लो समीक्षा Natalia देखि 25.01.2018 22:52 >>किन खरीद कार्यक्रम xheater तपाईं प्रदान छैन लाइसेन्स कुञ्जी र सक्रिय कार्यक्रम हटाइयो व्यवस्थापक: किनभने कुञ्जी दिइएको छ खरीद गर्दा दुई वा बढी कार्यक्रम, तपाईं खरीद गर्दा एक लाइसेन्स लागि एक कार्यक्रम छ, लाइसेन्स सक्रिय सर्भर मा. >>ती तिर्ने पैसा र भने झिंगा ओएस कम्प्युटर मा म साबित गर्न कहिले र कसरी म भुक्तानी को लागि यस कार्यक्रम र अर्थ भनेर म प्रयोग गर्न सक्छन् मा मात्र एक कम्प्युटर व्यवस्थापक: पुन हराएको लाइसेन्स माध्यम समर्थन को प्रावधान संग भुक्तान पुष्टि संग को मिति र समय भुक्तान को पुरानो आईडी गर्न जो सक्रिय लाइसेन्स र नयाँ आईडी गर्न चाहनुहुन्छ जो स्थानान्तरण गर्न लाइसेन्स. >>अरूलाई I want to warn - किनबेच कार्यक्रम बारे सोध्न लाइसेन्स कुञ्जी ,शायद तपाईं बन्द उड ओएस वा तपाईं बस काम गर्ने निर्णय टाढाबाट सम्भाव्यतालाई तपाईं यो छैन हुनेछ.... व्यवस्थापक: रिकभरी प्रक्रिया माथि वर्णन, एक मार्गदर्शन को स्थानान्तरण लागि लाइसेन्स आत्म-सक्रियता मा अर्को कम्प्युटर अन्तर्गत मद्दत->->लाइसेन्स स्थानान्तरण. अक्षम गर्न स्थानान्तरण अलग को असीमित नम्बर पटक! आफ्नो प्रतिक्रिया को लागि धन्यवाद! With best regards, Elinesoft. परियोजना XSpamer.ru
Natalia 25.01.2018 मा 22:52
म सोध्न चाहनुहुन्छ विकासकर्ताहरूको यी कार्यक्रम को - किन किन्ने कार्यक्रम xheater तपाईं प्रदान छैन लाइसेन्स कुञ्जी र सक्रिय कार्यक्रम मेटिएको यिनै तिर्ने पैसा र भने झिंगा ओएस कम्प्युटर मा म साबित गर्न कहिले र कसरी म भुक्तानी को लागि यस कार्यक्रम र अर्थ भनेर म प्रयोग गर्न सक्छन् मा मात्र एक कम्प्युटर किनभने, त्यहाँ छन् परिस्थितिमा जब मान्छे काम गर्दै दूर घर देखि र अब तपाईं को स्थानान्तरण लागि लाइसेन्स अरूलाई.कम्प्युटर तिर्न आवश्यक 500r .तपाईं दिंदा एक लाइसेन्स गर्न आग्रह गर्दै दिन कुञ्जीहरू र यो बाहिर जान्छ तपाईं हावा किन्न छैन सबैलाई यो मौका मा काम गर्न एक कम्प्युटर छ । बारे TP भन्न न त खराब न त राम्रो चाहँदैनन् त्यसैले मदत तिनीहरूलाई देखि प्रतीक्षा छैन .बारे कार्यक्रम तर म तिनीहरूलाई किनेको सबै4पीसी गर्न सक्नुहुन्छ otospitsya मात्र सकारात्मक गर्न ,तिनीहरूलाई बुझ्न पनि सजिलै beginners लागि र मान्छे साँच्चै थाह आफ्नो काम छ । सामान्य मा यो कार्यक्रम , ठूलो छ लागि रूपमा, मलाई कुनै राम्रो छ भन्दा सफ्टवेयर यी मान्छे.आदर गर्न । तर म तिमीलाई सोध्न दिन मलाई प्रमुख कार्यक्रम xheater र अरूलाई चेतावनी गर्न चाहनुहुन्छ - किनबेच कार्यक्रम बारे सोध्न लाइसेन्स कुञ्जी ,शायद तपाईं बन्द उड ओएस वा तपाईं बस काम गर्ने निर्णय टाढाबाट सम्भाव्यतालाई तपाईं यो छैन हुनेछ....
Anastasia 05.12.2017 मा 19:25
कार्यक्रम उत्कृष्ट छ, तपाईं गर्न सक्छन् बुझ्न पनि बिना गहन ज्ञान in this field. अनुमति बचत गर्न एक सभ्य राशि को बजेट मा विज्ञापन, प्रतिक्रिया देखि पत्राचार सूची साँच्चै छ! धेरै धेरै धन्यवाद सफ्टवेयर लागि!
Oleg 30.10.2017 मा 13:37
शुभ छ । कार्यक्रम XMailer खराब छैन र कार्यात्मक - कुनै शिकायत । तर XHeater त्यसपछि त्यहाँ छ काम गर्न । सबै भन्दा पहिले जब overclocking एक नयाँ डोमेन छ, 95% को इमेल don ' t just fall into your spam folder, र सबै मेल सेवा को पत्र पारित गर्दैन छ, हटाइयो को संभावना बिना सन्देश वितरण गर्न addressee. म विचार कारण छ कि जब तपाईं बनाउन messages, तपाईं सम्मिलित गर्न सक्छन् मात्र, शीर्षक को शरीर इमेल र लिंक (वा कुनै link). मूल्याङ्कन यस्तो सन्देश ई-मेल सेवा सहित विरोधी-स्पाम सेवाहरू जस्तै: mail-tester.com शायद दिन राम्रो अनुमान लगभग माथि 5, र यो ज्ञात गर्न मिसिन बन्दूक स्पाम छ । कार्यान्वयन क्षमता सम्मिलित तस्वीर (and then everything will be धेरै अधिक रोचक) हुनेछ भनेर एकदम वृद्धि को वितरण को पत्र को अन्तिम गन्तव्य मा यो dispersal domain.
Sergey 16.10.2017 मा 23:15
कति यहाँ Sergeev बीचमा ग्राहक :). के Malinga लागि6वर्ष छ । खोजे समाधान मा लिपि र पूर्ण कार्यक्रम (e.g. Sandblaster). सबै आफ्नो फाइदा र नोकसान छ । यदि मर्यादा अँगाले कि सबै को नोकसान, सबै लुकेका र बाहिर खोल्न, त्यसपछि नजिकै at the most inopportune moment. मा hmailer म अझै कुनै समस्या फेला परेन । सम्भव समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ विभिन्न फैंसी भाषा संस्करण विन्डोज, तर विकासकर्ताहरूको प्रतिक्रिया पर्याप्त सल्लाह on the merits र समाधान लगभग सबै मा उड । तपाईं मा सहमत गर्न सक्छन् एक आधुनिकीकरण कार्यक्रम तपाईं को लागि व्यक्तिगत र लागि एकदम सन्तुलित पैसा । यस्तो म अझै पूरा गरेनन् कुनै एक डेभलपर । आदर । सामान्य मा, यो थियो एक उत्कृष्ट कार्यक्रम छ । साँच्चै एक धेरै योग्य र असामान्य funkionalnoy. दुवै novice र pros दृष्टिकोण हुनेछ 100 %. यो प्रयोग गर्न तपाईं आवश्यक एक आधारभूत समझ को सिद्धान्त को बजार माइल वा पल्ट को एक जोडी rethink गर्न आफ्नो channel on YouTube. म ले सिफारिस गर्छन् गर्न छ सबै छ ।
यूजीन 17.08.2017 मा 18:07
कार्यक्रम राम्रो छ संग, यसको कार्य सामना गर्न सकिँदैन । त्यहाँ एउटा समस्या थियो प्रक्रिया मा, तर प्रविधी समर्थन मदत गर्न समाधान.
एन्टोन 01.08.2017 मा 17:43
उत्कृष्ट समर्थन! तापनि मेरो गल्ती, दस पटक chewed र मदत गर्न कार्यक्रम सेट अप.
एलेक्स 18.07.2017 मा 12:50
फेरि धन्यवाद - tech support! बावजुद "हार्ड technarchy" स्थिति (जब निर्णय स्पष्ट कार्य आराम संग ग्राहक
अलेक्जेन्डर 10.07.2017 at 2:26
यो सबै भन्दा राम्रो कार्यक्रम छ सबै छ कि, यो पत्र पुग्न सबै मा रही बिना स्पैम, बुझ्न गाह्रो छैन र पनि रोमाञ्चक किनभने, परिणाम सधैं खुसी तुल्याउने छ । सफलता को लागि आफ्नो टीम!
भिटाली 11.05.2017 मा 15:53
निर्णय गर्न पनि छोड्न एक समीक्षा साझेदारी गर्न आफ्नो अनुभव! सारा सेट देखि कार्यक्रम को विकासकर्ता पहिले, यो खरीद को कार्यक्रम गरे सबै हात खर्च आधा दिन मा सेटअप र स्थापना scripts. अब धेरै समय जारी थियो, हेर्न मात्र विश्लेषक र छैन भने पहिले नै लिएर विभिन्न कार्यहरू! म इच्छा डेवलपर्स सफलता र विकास, यो दिशा मा बजार रूपमा अब निश्चित छ, जसले यति आशक्त मा स्वचालन को इमेल समाचारपत्रहरूमा. र ती समर्थन धैर्य को धेरै, कहिलेकाहीं उहाँले सोध्नुभयो यस्तो मूर्ख प्रश्नहरू)
एलेक्स 11.04.2017 मा 19:38
बारे सोधे संशोधन: छुट्टै जाँच को मेल मा XHeater, बिना पठाउन समारोह छ । समाप्त in2दिन. धेरै खुसी भन्ने सबै अंतिम रूप छ र त्यहाँ सजिलो छ संग संचार को विकासकर्ता छ ।
Ivan 24.03.2017 मा 14:24
म चाहन्छु मेरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न टीम! म छु छैन विशेष, र यो पूर्ण छैन मेरो प्रोफाइल (समाचार). त्यसैले सबै शब्दहरू सजिलै यो आफ्नै छ । र कहिलेकाहीं म स्क्रू । र समर्थन मलाई मदत गर्छ. मात्र आज जस्तै महसुस एक पूर्ण मूर्ख जब म लागि 1 मिनेट देखाए कसरी सबै काम गर्दछ. र म केही गरे को लागि2दिन. धेरै सुन्दर प्रविधी. समर्थन । धन्यवाद मान्छे.
दिमित्री 12.03.2017 मा 22:57
म धन्यवाद दिन चाहन्छु टीम को यो निर्माण । समकक्षों म भेट, यद्यपि, र के डायरेक्ट मेल संकुल लागि तीन वर्ष छ । थाहा छैन कसरी लामो हुनेछ विषय xservera, तर यो aerobatics. राम्रो बजार मा त्यहाँ केही लागि यो पैसा र प्रतिस्पर्धी छैन सफ्टवेयर. Epochta smokes sidelines मा । धन्यवाद फेरि डेवलपर्स!
म हूँ सदमा तीन वर्ष पहिले निर्धारित र गदगद रूपमा यो अब छ भनिन्छ, आफ्नो डोमेन स्वयं गर्न । अब पूर्ण स्वचालन भने - कार्यक्षमता पुष्टि भएको छ - कुनै शंका - हामी छौँ विश्वास चमत्कार ।
यूजीन 18.02.2017 at 7:52
धेरै धेरै धन्यवाद लागि सफ्टवेयर । म शाब्दिक दिन पछि आफ्नो खरीद छ, प्रक्रियामा भन्दा बढी 20K. मान्छे, म सबै शब्दहरू सजिलै छन् छैन penetrated छ । तर म भन्न सकिन्छ कि ई-मेल बाँकी छ, खैर म यो पनि!!!
Artem 03.02.2017 मा 16:22
कार्यक्रम शक्तिशाली छ र हुनेछ जो, त्यहाँ टिप्पणी मा भने inboks अवश्य पत्र भने उनलाई ठीक छैन बस प्रतिलिपि कसैले.
एन्ड्रयू 09.12.2016 at 1:55
लेख्ने मान्छे डेवलपर्स र प्राविधिक सहयोग. एक विशाल धन्यवाद तपाईं आफ्नो काम को लागि. प्रथम कार्यक्रम, जो तिनीहरूले गरे - एक साँच्चै साँच्चै सुन्दर उपकरण लागि इमेल मार्केटिङ. दोस्रो - समर्थन भइरहेको छ, एक धेरै उच्च स्तर मा. चाँडै, सही र स्पष्ट छ । तपाईं प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने इमेल मार्केटिङ - म सिफारिस - लिन एक सेट देखि कार्यक्रम को - तपाईं प्राप्त छौँ आफ्नो लागत धेरै चाँडै ।
Sergey 19.11.2016 मा 21:10
I read the comments, रूपमा सधैं,)) तपाईं छन् भनेर बुझ्न मान्छे - को डेवलपर्स बनाउन क्रान्तिको सिएम उत्पादन XMailer र अतिरिक्त सेवाहरू । पैसा खर्च र किनेको सबै तिनीहरूले प्रस्ताव, खरीद बुझ्न भनेर लगानी को विकास मा परियोजना मा सबै भन्दा राम्रो छ यसको खण्डको, कम खर्च मा बाँया-भाग कार्यक्रम र लिपि आदि गर्न एक घोटाला छ । धन्यवाद भन्न डेवलपर्स भन्न केही छ । एक विशाल धन्यवाद, व्यक्तिगत मलाई देखि छ ।
एलेक्स 19.11.2016 मा 12:56
राम्रो दिन! तपाईं मान्छे रक - दुई वितरण संग मुक्त संस्करण (भन्ने तथ्यलाई बावजुद 60% को पहिलो थियो एक माथि पेंच कारण अज्ञानता को sinonimayzer) - 80000 rubles को नेट आय । किनेको पूर्ण संस्करण मा एक छुट छ । हामी काम गर्न जारी हुनेछ!
दिमित्री 18.10.2016 मा 17:25
प्रयोग यस टीम को लागि एक लामो समय र थाहा भएको मान्छे धेरै राम्रो, निरन्तर बनाउने बारे सुझाव सुधार, धेरै पहिले नै कार्यक्रम छ । लागि तिनीहरूलाई धन्यवाद छ । को आगमन संग जटिल कार्यक्रम को स्थापना, सर्भर सुरु email धेरै सजिलो थियो. इनबक्स हुनेछ कि तपाईं बताउन तपाईं आवश्यकता अनुगमन गर्न निरन्तर पठाउन को मामला मा, मा मारा स्पाम कारबाही गर्न, तर यो मात्र गरेको छ भने तपाईं एक टाउको छ । म सल्लाह छैन सबैलाई अल्छी हुन, बुझ्न र बुझ्न इमेल वितरण, विज्ञापन, सस्ता हुदैन ।
एन्ड्रयू 18.10.2016 मा 16:32
सी हातमा सबै सही, बस एक 3rd spamer आज अब प्रासंगिक छ । फिल्टर विकास प्रतिघण्टा र तिनीहरूलाई संग राख्न गाह्रो छ । कार्यक्रम रूपमा सरल3पेन्नीज, त्यहाँ छ यो कठिनाई बारे छैन कुरा । कार्यक्षमता धनी तर zryashnoe. इनबक्स मा छैन भन्दा बढी 3% मा त्रुटि को 40% या अधिक । गम्भीर स्पैमिंग काम छैन 100 पाउण्ड, तर यो सानो कुरा, जस्तै पत्राचार आफ्नो com.प्रस्ताव लागि एक सानो संख्या को ठेगाना सम्भव छ । ती.समर्थन stremnovato, बस मा पठाउन Skype, तर तुरुन्तै प्रतिक्रिया छ । यो जस्तै केहि
Fyodor 12.10.2016 मा 12:24
सबै समीक्षा किनेको हो, तर कार्यक्रम बेकारी छ । काम छैन
शुभ,कार्यक्रम किनेको र xservers xspammer दिन को एक जोडी पहिले,धेरै सन्तुष्ट! धनी कार्यक्षमता,पहिले काम मा लिपि, mailwizz अब मात्र हुनेछ संग काम xspammer, प्राविधिक सहयोग सधैं उपलब्ध छ,सामान्य मा, सबै धेरै खुसी छ!-) धन्यवाद
Master 19.09.2016 मा 18:39
ठूलो कार्यक्रम छु, म संग तपाईं आफ्नो कम्प्युटर मा 1993 देखि, र मात्र देखेको, विभिन्न प्रयास कोर्नु देखि. टीम एक विशाल gracefulness लागि अचम्मको काम लागि हात छ कि त्यहाँ देखि बढ्न!!!!!!!!!!!! धन्यवाद मान्छे आफ्नो ठूलो काम को लागि!!!!
निकोलस 18.09.2016 at 1:38
भने हात बढ्न छैन ठाँउ देखि, त्यसपछि यो कार्यक्रम तपाईं को लागि छैन.
इगोर 13.09.2016 at 9:53
बुझ्दैनन् कार्यक्रम छ । सक्दैन, यो परीक्षण छ । सिर्जना एक पत्र पठाए आफूलाई, तर पत्र गए । तपाईं तिर्न आवश्यक 5000 दल्ने । को सञ्चालन जाँच गर्न कार्यक्रम छ । के बात!!!!
इगोर 03.09.2016 मा 19:00
यसको क्षमताहरु xSpamer छोडेर टाढा पछि यसको प्रतियोगिहरु को धेरै - तिनीहरूले गर्न सक्छन् मात्र निल्छन् धूलो... म प्रयास धेरै कार्यक्रम र लिपि मेल पठाउन, तर रोकियो निश्चित xSpamer. यो एक वास्तविक संयोजन! मा एक सुविधाजनक र सरल इन्टरफेस प्रदर्शित देखि सबै विषयगत डेटाबेस बन्द पछि कम्प्युटर को उत्पादन वितरण । तंत्र को randomization - र इमेल र पदहरू, र हेडर, र प्रकार को प्रेषक, र लिंक, र धेरै बाँकी गरौं - unikalizirovat हरेक पत्र को हजारौं को सयौं! निर्माण-मा काली सूची को दुई प्रकार (को नियम लागि विशेष), खोज लागि उपलब्ध डोमेन लागि पठाउने सर्भर... म कुरा गरिरहेको छैन छु कि निर्माण-मा सुरक्षा देखि असंगत कार्यहरू को प्रयोगकर्ता, छक्कै पर्छन् मा पठाउन सर्भर, र पनि समस्या संग इन्टरनेट जडान! र रचनाकार निरन्तर माथि आउँदै संग र कार्यान्वयन नयाँ र नयाँ चिप्स! र त्यहाँ छ जहाँ एक मंच तपाईं संग परामर्श गर्न सक्छन् साथीहरूले...
जर्ज 05.05.2016 मा 16:51
कार्यक्रम Xspamer धेरै सुविधाजनक र प्रयोग गर्न सजिलो. र टीम सुपर । धन्यवाद मित्र ठूलो
Yulia Sokolova 11.03.2016 मा 21:55
यो सबै भन्दा राम्रो कार्यक्रम छ लागि इमेल मार्केटिङ अभियान आज - र म पक्का छु त्यो, छ र रहनेछ सबै भन्दा राम्रो रूपमा तिनीहरूले जोडी अधिक र अधिक नयाँ चिप्स. यसबाहेक, प्रयोग कार्यक्रम को विशेषताहरु छैन सवारी मा अन्य विभिन्न स्रोत - यो सबै छ: खाता लागि पत्राचार सूची (यदि छैन प्रयोग आफ्नो SMTP सर्भर), र उपकरण लागि अधिकतम randomization, र को एक असीमित नम्बर HTML टेम्प्लेट ( यदि तपाईं पठाउन चाहनुहुन्छ रंगीन पत्र र बस प्रयोग सादा-पाठ सम्पादक). साथै धेरै अधिक जानकारी बाइपास स्पाम फिल्टर छ । र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि गर्न सक्छन् कार्यक्रम मास्टर पनि beginners गर्न पैसा कमाउन रूपमा इन्टरनेट मुक्त पहुँच, धेरै उच्च गुणवत्ता मुक्त कदम-द्वारा-चरण पाठ्यक्रम, सबैभन्दा संकुचित, विस्तृत भिडियो पाठ संग काम देखि कार्यक्रम को मुख्य छापामार छापामार बजार छ । ( Poparte यस्तो पाठ्यक्रम हुनेछ नेतृत्व मा). एक शुरुवात रूपमा अनलाइन कमाउन तपाईं आवश्यक पहिलो र प्रमुख यातायात गर्न आफ्नो परियोजना info-उत्पादन, एक marketable उत्पादन । र मात्र कार्यक्रम Spamer उसलाई मदत गर्नेछ आकार मा आफ्नो सदस्यता आधार मुक्त लागि ( अन्य सबै विकल्प आवश्यकता विशाल निवेश). पर्याप्त तिर्न 1000 rubles लागि लाइसेन्स पहुँच गर्न सबै उपकरण - तर यो लायक छ. र त्यो सबै छैन: कार्यक्रम छ, एक धेरै रोचक र gipsey2दुई-टियर संबद्ध कार्यक्रम छ । जडान अधिक र बढ्न हामीलाई साथ!
इल्या 06.03.2016 मा 18:27
Hi all. अधिकार भन्दा बढी 30 प्रकारका यातायात, तर सधैं छन् पाऱ्यो भन्ने तथ्यलाई द्वारा इमेल मार्केटिङ मलाई छैन । किनेको एक गुच्छा सफ्टवेयर, लिपि. उहाँले स्थापित र कन्फिगर गरिएको smtp सर्भर मा VDS. अझै पनि इनबक्स छ एक अधिकतम 1-2%. संग बैठक पछि xspammer र माध्यम व्यक्तिगत consultations संग धारकों को सेवा provds बल्ल मिल्यो inboks 30%. The result is increased by 15 पटक!!!! म कसरी बुझ्न अनियमित पाठ, के र कति तपाईं आवश्यक प्रोक्सी, के सेटिङ हो नौकरी देखि निकाल विरोधी स्पाम हुलाक र कसरी गर्न तिनीहरूलाई जोगिन. सुपर. अब मेरो शस्त्रागार 31 उपकरण इन्टरनेट विपणन. सिफारिस हुनेछ. खैर को भुक्तानी संस्करण सफ्टवेयर खरिद smtp मा बन्द भुक्तानी बस एक हप्ता. पनि धन्यवाद गर्न निर्माण-मा डेटाबेस 2gis मा कार्यक्रम नै छ ।
Oleg Ерофеев 14.02.2016 मा 0:15
I read the comments above र पूर्ण सहमत यूजीन, अरूलाई स्पष्ट छैन प्रयास संग काम गर्न साँच्चै जटिल कार्यक्रम छ । व्यक्तिगत, म सजिलो र अधिक कार्यात्मक देखेको छैन र प्रयास को एक दर्जन अनलाइन सेवा र कार्यक्रम. म तिमीलाई इच्छा समृद्धि र नित्य सुधार को कार्यक्षमता मा कदम संग पटक!
SEOBoss 11.01.2016 मा 16:36
प्रयोग Xspamer लागि वितरण गर्न आफ्नो डेटाबेस को बारेमा 1000 इमेल), पर्याप्त परीक्षण संस्करण. सबै बस बाहिर क्रमबद्ध तुरुन्तै । राम्रो किस्मत गर्न आफ्नो टीम । विकास परियोजना!
Sergey Викторович 14.12.2015 मा 13:19
हो, म सहमत, कार्यक्रम सरल छैन, तर म निरन्तर कुराकानी प्राविधिक सहयोग प्रबन्धक, उहाँले भन्नुभयो मलाई सल्लाह र म पहिले नै धेरै राम्रो तरिकाले महारत Issamerm. यो कार्यक्रम प्रयोग एक लामो समय देखि, दोस्रो संस्करण, अब उत्प्रेरित गर्न तेस्रो, यो छ जहाँ जोडी धेरै उपयोगी कार्यहरु छ मलाई । सामान्य मा, सबै खुसी प्राप्त गर्न खोजे धेरै कार्यक्रम छ, तर सबै पत्र गर्छन फस्न स्पाम, तर मदत संग exsphere सफलतापूर्वक पठाइयो, अब म मिल्यो सबै विवरण र अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ newsletter. सेटिङ, र समुचित पर्याप्त विशेषताहरु!
उपन्यास 08.12.2015 मा 14:06
ठूलो प्रोग्राम छ । सेटिङ जटिल छ । कृपया सकेसम्म सरल सेटिङहरू र कि जस्तै केहि को "विशेषज्ञ" मोड ।
Leave your feedback बारेमा XMailer, XServers, XDomains, XHeater, Allion